FALANQAYN: UEFA Oo Qiimayn Ku Samaysay Fursada Boqolkiiba Ay Koox Kastaa U Haysato In Ay Siddeed Dhamaadka Champions league U Soo Baxaan, Man United Oo Qiil Loo Waayay, Maxaase Laga Yidhi Liverpool & Barcelona? - GOOL24.NET
FALANQAYN: UEFA Oo Qiimayn Ku Samaysay Fursada Boqolkiiba Ay Koox Kastaa U Haysato In Ay Siddeed Dhamaadka Champions league U Soo Baxaan, Man United Oo Qiil Loo Waayay, Maxaase Laga Yidhi Liverpool & Barcelona?
March 4, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxaha qaybta ka ah tartanka UEFA Champions league ayaa isku diyaarinaya kulamada lugta labaad ee wareega 16ka kooxood ee tartana Champions league waana kulamada sida rasmiga ah loogu go’aamin doono siddeeda kooxood ee u soo bixi doona wareega xiga laakiin haddaba kooxaha ayaa la soo kulmay natiijoojin kala duwan oo saamayn buuxda yeelan kara.
Kooxaha 16ka ah ee ku dagaalamaya UEFA Champions league waxay kulamadii lugtii kowaad ee la soo ciyaaray ay soo heleen natiijooyin kala duwan iyada oo kooxaha ugu fiicani ay yihiin kooxihii guulaha soo gaadhay, kooxo kale ayaa barbaro galay halka kuwa ugu liitaa ay yihiin kooxihii guuldaraystay kulamadii lugtii hore.
Haddaba xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa qiimayn buuxda ku sameeyay fursad kasta oo ay haystaan 16ka kooxood ee Champions league qaybta ka ahi iyada oo qiimayntan lagu salaynayo wixii ay taariikhdu ka qortay isla natiijo kasta oo ay kooxahani kulamadii lugtii hore la soo kulmeen.
Waxaa marar badan loo soo taagnaa in xogta taariikhda UEFA ay u dhacday isla saadaashii laga bixiyay halka marar aad u yar la arko waxyaabo ka duwan taariikhda Champions League oo ay kooxo iska indho tiraan wax walba oo adag isla markaana ay layaab cusub sameeyaan.
Haddaba akhristow, fursad boqolkiiba imisa ah ayay kooxdaadu u haysataa in ay siddeed dhamaadka Champions league ugu soo baxdo kulamada lugta labaad ee soo socda?
Shabakada Gool24 ayaa halkan si buuxda idiinku soo turjuntay warbixinta ay UEFA ku qiimaysay 16ka kooxood ee Champions League ku tartamaya iyo koox kastaaba fursada ay u haysato in ay wareega xiga u soo bixi karto iyada oo la adeegsanayo tirada kulamadii isla natiijada kulamadii lugtii hore ku soo dhamaatay in uu tartankani jiray iyo fursada oo boqoley loo badalay.
Haddaba halkan kaga bogo koox kasta oo Champions league ku jirtaa fursada ay u haysato in kulamada lugta labaad ay soo bixi karto iyada oo xogta taariikhda UEFA Champions League ee abid lagu salaynayo iyo natiijada kulamadii lugtii hore ee ay koox kastaaba soo heshay.
Kulamada Talaadada Ee March 5
Aan ku bilawnee kooxda Tottenham oo 3-0 ku dubatay Dortmund ayaa haysata fursad boqolkiiba 94.6% ah oo ay wareega siddeed dhamaadka Champions League ugu soo bixi karto maadaama oo ay taariikhdu sheegayso in 123 jeer oo ay kooxo ku badiyeen 3-0 kulankii lugtii hore in ay soo baxeen halka Dortmund ay haysato boqolkiiba 5.4% kaliya oo ay wareega xiga ugu soo bixi karto.
Dhinaca kale Real Madrid ayaa haysata boqolkiiba 94% ay wareega sideed dhamaadka ugu soo bixi karto kulanka lugta labaad ee Bernabeu iyada oo 94 jeer oo ay kooxo kulankii lugtii hore ku badiyeen 2-1 ah ay soo gudbeen halka kooxda Ajax ay haysato fursad boqolkiiba 6% kaliya ah oo ay wareega xiga ugu soo bixi karto.
Halkan kaga bogo Xogta Kulamada March 5 Iyo Fursada Ay Kala Haystaan:
Dortmund v Tottenham (first leg: 0-3)
Tirada Kulamadii Ay Natiijadii Lugtii Hore Uga Soo Dhacday UCL: 130
Kulamadii ay kooxi gaaroonkeeda Ku Soo baxday : 7 (5.4%)
Kulamadii ay Kooxi Lugtii Labaad Oo Marti Ah Ay Soo Baxday: 123 (94.6%)
Real Madrid v Ajax (2-1)
Tirada Natiijadii Lugtii Hore Ay Hore U Soo Dhacday: 100
Kulamadii ay kooxi gaaroonkeeda Ku Soo baxday: 94 (94%)
Kulamadii ay Kooxi Lugtii Labaad Oo Marti Ah Ay Soo Baxday: 6 (6%)
Riix 2 si aad u akhrisato dhamaan kulamada kooxaha kale iyo fursada ay haystaan.
Saciid kharar says:
Inta kale dhamaan waa sax laakin Liverpool Ma hadhayso saadasha kale dhamaan waa sax laakin kulanka München vs Liverpool waxa 100/100 soo baxaysa liverpool ✅
Waa runtii sheekhaas liverpool ma hadayso✅✅✅✅✅✅
Yaxye maxamuud says:
Way hadhaysaa rumayso ama ha rumaysan
Muad Abdiaziz says:
Waa sax saadaashaasi laakiin halkaas waxaa jira in ay LIVERPOOL soo baxayso 90%.
Mumink codka says:
Liverpool iyo juventus waxey haystaan fursado 100%50 Sxb yaal
Fursadu awooda ma aha oo taas koox kastaaba waxa ay qabsan karto diyaar ayay u tahay, laakiin marka la eego taariikhda Champions league iyo xogta natiijooyinkii abid ee isla natiijooyinka lugtii hore oo kale ku soo dhamaaday, kooxihii ay arintan oo kale ku soo dhacday ayay fursadoodu aad u yarayd in ay soo gudbaan.
Anaga taariikh iyo waxa hanoola imanina. Inigu bal difaaca Soo istaaga oo na reeba. Liverpool ayaa hafhaysaad ku seexataan. Waar waligeed ma hadhayso. Koobkuba ma isgaa macaanaanaya hadaan hadhno. Anaga labada garoonba waa isku mid. Waligayana ma hadhayno. Viva liverpool
amin aj says:
waa sida aad sheegteen khabiirada laacinet
warkiina waa war jira waayo idinkaa nooga aqoon badan tahay mohamed batalaate
si fiican ayaa saadashaa u soo dhigtay taageere ahaan uma hadlayo ee xaqiiqda ayaa uhadlayaa
Mohamett dalnurshe says: